sidee bay uga jawaabeen hey’adaha amnigu Su’aalihii ay weydiiyeen xildhibaanadu? (AQRISO) – Soomaali 24 Media Network
sidee bay uga jawaabeen hey’adaha amnigu Su’aalihii ay weydiiyeen xildhibaanadu? (AQRISO)
Aqalka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta su’aalo weydiiyey hey’adaha amniga dalka Soomaaliya ka dib markii mudooyinkii la soo dhaafay ay sii xumaanaysay xaaladda amni ee magaalada muqdisho.
Taliye ku xegeenka hey’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ahna ku simaha Taliyaha hey’adda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka mid ahaa xubnaha manta hor yimid Golaha Shacabka si wax looga weydiiyo xaaladda amni ee dalka Soomaaliya.
Fahad Yaasiin oo dad badani aamin san yihiin inuu yahay nin awood xooggan ku leh maamulka Soomaaliya lagu tilmaamo inuu yahay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee daaha gadaashiisa ka maamula dalka ayaa xildhibaanadu weydiiyeen su’aalo badan oo la xidhiidha amniga dalka gaar ahaan shaqada hey’adda uu madaxda ka yahay ee NISA.
Inkastoo ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd kulanka haddana wararka la helay ayaa tibaaxaya in Fahad uu san si hufan uga jawaabin dhamaan su’aalihii la weydiiyey taa bedelkeedana uu su’aalihii la weydiiyey jawaabahooda ku riixay masuuliyiinta Wasaarado iyo Hey’ado kale halka su’aalaha qaarkoodna uu si cad u diiday inuu ka jawaabo.
Ku-simaha Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka carooday su’aal uu weydiiyey xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka, isagoo ugu hanjabay inuu dacwad ku soo oogayo, sharcigana la tiigsanayo.
Previous Wax ka ogoow sababaha keenay inay kordhaan qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Muqdisho.
Next Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo Moscow kula kulmay dhiggiisa Ruushka